नेकपाको गन्तव्य ! | Ratopati
नेकपाको गन्तव्य !
personआरसी अधिकारी exploreकाठमाडौं access_timeभदौ ३१, २०७६ chat_bubble_outline0
तर पार्टी एकताका १६ महिना नेकपाका लागि उतार चढावपूर्ण रहे । दुवै अध्यक्षका लागि यी १६ महिना उहाँहरूका राजनीतिक जीवनमा नयाँ प्रयोग पनि भयो । तीन महिनामा सक्ने भनिएको सङ्गठनात्मक एकता र कार्यविभाजनको काम एक वर्षको ‘बोनस’ अवधिमा पनि सकिएन ।
प्रधानमन्त्री ओली उपचारका लागि सिङ्गापुरमा अलि लामो समय बस्नुपर्ने अवस्था आएपछि साउनको अन्तिम सातातिर नेकपाले सङ्गठनात्मक एकतामा अलि धेरै प्रगति गर्यो । तर नेता माधवकुमार नेपाल २०७५ भदौ ३ गते पार्टीमा दर्ता गराएको सात बुँदे फरक मतले लगभग टुङ्गिएको नेकपाको सङ्गठनात्मक एकतालाई खल्लो बनाइदियो ।
यो बीचमा सङ्गठनात्मक एकताको मात्र होइन, विवाद वैचारिक पाटोमा पनि देखियो । एकतामा पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा ‘जनताको जनवाद’ भन्ने सहमति भयो र त्यसैअनुसारको राजनीतिक प्रतिवेदन पनि छापियो । पूर्वसमूह अनुसार कतिपय नेताले आफ्नो पदको सुरक्षाका लागि जनताको बहुदलीय जनवाद र २१औँ शताब्दीको जनवाद भन्ने बहस आआफ्नो सुविधामा उचाले । नेकपाको १६ महिनाभित्र केही समय यही अनावश्यक विवादमा पनि खपत भयो । यही बीचमा सत्ता साझेदारीको बहसले शीर्ष नेतावी अविश्वास पनि मेटायो । पार्टी एकता गर्दा भएको भनिएको ‘गोप्य सहमति’ बारे आआफ्नो सुविधामा व्याख्या भयो ।
यसै अनुसार प्रचण्डले सचिवालयको बैठक पनि बोलाए । नेकपाको अन्तरिम विधान–२०७५ मा अध्याय तीनमा केन्द्रीय निकायको उल्लेख छ । जसमा बुँदा १८ को केन्द्रीय कमिटीको ‘च’मा अध्यक्षको अधिकार र कर्तव्य छ । यसमा अध्यक्षका आठ अधिकार तय भएका छन् । त्यसभित्र विभिन्न बैठक बोलाउने बुँदा पनि छ । प्रचण्डले बैठक बोलाउँदा नेकपामा प्रवास कमिटी, महानगरहरूको नेतृत्व, पोलिट्ब्युरो गठन, अन्य केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन लगायत कार्यसूचीमा निर्णय हुन बाँकी थियो । तीमध्ये केही काम भदौ ९ गते प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले टुङ्ग्यायो । विधानले पालैपालो अध्यक्षता गर्ने भने पनि १५ महिनापछि प्रचण्डलाई बैठकको अध्यक्षता गर्ने मौका मिल्यो । यसले दुवै पाइलट उडानका लागि तयार छन् भन्ने सन्देश पनि दियो ।
संविधानले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्य घोषणा गर्नुका साथै समाजवाद उन्मुख सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका निम्ति मार्गदर्शन पनि गरेको छ । तत्कालीन नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू खास गरी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वको दाबी त केसम्म छ भने यदि उनीहरू नभएको भए न त संविधानसभाको विषय राष्ट्रिय कार्यसूची बन्न सक्थ्यो, न विभिन्न बाधाअवरोधलाई पन्छाउँदै संविधान सभाबाट समाजवाद उन्मुख संविधान नै घोषणा हुन सक्थ्यो । यतिमा मात्रै उनीहरूको दाबी रोकिन्न । भन्ने गरेका छन्, ‘कम्युनिस्टहरूको अथक प्रयत्न र पहल नभएको भए नेपालमा आजका यी अग्रगामी परिवर्तनहरू सम्भव हुने थिएनन् । अब यिनै दुई पार्टीको काँधमा सामाजिक न्यायमा आधारित सुसंस्कृत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ ।’
एकातिर समाजवादी अर्थतन्त्रको मुद्दा छ । अर्कोतिर नयाँ पार्टीले राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्र सीमित छैन भन्ने राजनीतिक प्रचारलाई व्यवहारिक रूप दिन खाँचो छ । समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्रको अभ्यासतिर ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो यो अभ्यास सत्तारूढ दलको हैसियतमा नेकपाले गर्नुपर्छ ।
आफू अनुकूल भएन भनेर संविधानसम्मत समाजवाद उन्मुख प्रणालीलाई भत्काउने र राष्ट्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास भुलेरै पनि गर्नुहुन्न । त्यसो भयो भने त समाजवाद–उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र धर्मनिरपेक्षताजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिसहित जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली लिखत मात्रै हुन्छन्, व्यवहारमा देखिन्नन् । हामीलाई चाहिएको प्रगतिशील समाजवाद हो, न कि पुँजीवादी समाजवाद ।
‘गन्तव्य’ तय छ तर केही प्रश्न छन् । नेकपाको दाबी जस्तै के नेताहरूसँग एउटै लक्ष्य छ ? एउटै कार्यसूची र एउटै मिसन छ ? इच्छाशक्ति र इमानदारिता छ ? उनीहरूसँग समाजवादी दिशामा जाने पुँजी जुटाउने के मोडल छ ? छिमेकी र अरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गर्ने परिपक्व कूटनीति छ ? यी प्रश्नको जवाफमा नेकपा ‘गन्तव्य’मा पुग्ने– नपुग्ने उत्तर छ ।
#प्रचण्ड#केपी शर्मा ओली#विचार#नेकपा